तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? ४ संजीवनी उपाय अपनाउनुहोस् कहिल्यै धन को कमी हुनेछैन.. – Namaste Dainik
August 18, 2020 NamastedainikLeaveaComment on तपाईको हातमा पैसा टिक्दैन ? ४ संजीवनी उपाय अपनाउनुहोस् कहिल्यै धन को कमी हुनेछैन..
बायाँ खुट्टामा कोठी हुनु पनि पैसा नटिक्ने संकेत हो । यस्ता ब्यक्तिले पैसा बचाउन नसक्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।चोरी औंलामा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले जीवनमा धन अभाव भोग्छन् ।हत्केलामा वृहस्पति पर्वतमा कोठी छ भने यस्ता ब्यक्तिले पनि धन बचाउन सक्दैन
भाईरल अर्जुनले अर्को बिहे गर्नी निर्णय गरे (हेर्नुस् भिडियो)
म अहिलेसम्म कसैको प्रेममा परेकै छैन, तर कोही कोही मेरो प्रेममा परेका होलान् : कोमल वली(भिडियो पनि)
ॐ ॐ ॐ यस्तो दुर्लभ दाहिने शंख जसले जिवनमा धन, सम्पती र खुसी मिल्ने छ ! कमेन्टमा ॐ लेखी शेयर गर्नुहोस् !
भुलेर पनि मार्न हुँदैन सर्प, नत्र यस्तो गम्भिर संकट पर्न सक्छ